पोखराको न्यूरोडस्थित फर्निचर पसलमा भीषण आगलागी - Hamro Abhiyan
पोखराको न्यूरोडस्थित फर्निचर पसलमा भीषण आगलागी
पोखरा– कास्कीको पोखरामा आगो लागेको छ । पोखराको न्यूरोडस्थित एक फर्निचर पसलमा आगलागी भएको हो ।
प्रहरीका अनुसार न्यूरोडमा रहेको नवदूर्गा फर्निचर पसलमा आगो लागेको हो ।
फर्निचर पसलमा लागेको आगो अन्य पसलमा पनि सल्किएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार अहिले आगो निभाउने प्रयास जारी छ ।
सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्दा युवकले आफ्नो लिं’गले युवतीलाई घोच्न थालेपछि…
काठमाडौं । पछिल्लो समय सार्वजनिक स्थानहरुमा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरु बढ्दै गइरहेका छन् । यो बीचमा एक निकै आश्चर्यजनक घटना सार्वजनिक भएको छ । यही सोमबार भारतको बैंगलोरको मेट्रोमा एक युवकले यस्तो हर्कत गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार आएको छ ।
मेट्रोमा यात्रा गरिरहेका एक युवकले उभिने क्रममा आफ्नो लिं’ग बाहिर निकाले त्यसपछि एक युवतीसँग टाँसिएर अश्लील तरिकाले प्रस्तुत भए । युवतीले पछाडि छाम्दा तर्सिएर एक्कासी चिच्याइन् । युवतीको कुरा सुनेपछि त्यहाँ भएका यात्रुले ती युवकलाई निर्घात कुटपिट गरे । त्यसपछि यात्रीले युवकलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइदिएको समाचार बाहिर आएको छ ।
२७ वर्षका यी युवक एक निजी कम्पनीमा काम गर्छन् । युवक उत्तर कन्नाड जिल्लाको सिरसीका प्रविण बी हेगडे भएको बताइएको छ । युवतीले उजुरीमा बताएअनुसार युवक मेट्रोमा उनको पछाडि उभिएका थिए र उनीसँग लगातार टाँसिइरहेका थिए । उनले युवकको यस्तो हर्कतको विरोध गर्दै टाढा रहन भनिन् ।
यत्तिकैमा युवतीलाई केही चिसो महसुस भयो । उनले पछाडि छाम्दा युवकको लिं’ग उनको हातमा आयो । त्यसपछि उनी आत्तिएर चिच्याउन थालिन् । युवकमाथि अश्लील कृत्य, यौन प्रताडना र बलात्कारको प्रयासको मुद्दा चलाएर प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान अगाडी बढाएको जनाएको छ । एजेन्सी
रवीे लामिछानेलाई खिल्ली उडाउँदै पत्रकार खेम भण्डारीले लेखे यस्तो कडा स्टाटस, फेसबुकमा…
सलाम छ कुलमानलाई ! सडक नखनेरै राजधानीमा बिजुलीका तार भूमिगत गर्दै
टोल सुधार समितिले नै बो’क्सीको आ’रोप लगाउँदै एक दम्पत्तीलाई गाउँ…
बुहारीको मृ’त्युपछि जेठाजु प’क्राउ : अब देखि यस्तो का’नुन लागु…
घरमा श्रीमती हुँदा-हुँदै परस्त्रीलाई श्रीमती भन्न सक्ने केटाहरु प्रती घृ’णा लाग्छ !-…
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पश्चिम क्षेत्रको भ्रमणमा – स्वागत गर्न समर्थकहरुको…
© 2019 - Hamro Abhiyan. All Rights Reserved.